ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5ပထမဦးစွာ Daters အမျိုးအစား. သင်အဘယ်တစ်ခုမှာ Are?
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇန်နဝါရီ. 12 2021 |3မိဖတ်ပြီးသား
အောင်မြင်တဲ့နောက်ဆုံးရက် daters ၏သဟဇာတအပေါ်မူတည်. ထိုအသင်တကယ်ကိုနေသောအန္တရာယ်မကျရောက်စေဘဲသင့်ရဲ့အပြုသဘောဝိသေသလက္ခဏာများကို ပို. ထုတ်ဆောင်ကူညီနိုင်ကြပါသည် dater အမျိုးအစားကို သိ..
ဒါကြောင့်, dater အမျိုးအစားကတော့သင်သင်ပြောမယ်လို့?
သင်တို့ကိုကျော်-talk ရောက်နေတယ်ဆိုရင်, သင်ဖွယ်ရှိသည့် extrovert ထက်ပိုပါတယ်. တခါတရံ gab သင့်ရဲ့ဆုလက်ဆောင်ပြောဆိုဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့လုပ်ဖို့အာရုံကြောနှင့်လျော့နည်းဘဲထိုအတူပြုဖို့ပိုရှိပါတယ်. စကားပြောသည့်အခါတစ်ခါတစ်ရံသင်ကလူကိုပယ်ဖြတ်, မသင်တန်း၏ရည်ရွယ်ချက်အပေါ်, သင်တို့သည်နောက်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ဦးကကိုယ့်ကိုယ်ကိုခန့်သူတို့ကိုပြောပြရန်တောင်းသည့်အခါမှန်သောစကားကိုရှာဖွေရှိသည်. ကိုယ့်အဖြစ်ကိုကောင်းစွာသင်စကားပြောအဖြစ်နားထောင်နည်းကိုလေ့လာရလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်နှင့်သင့်နေ့စွဲတစ်ခုချင်းစီအခြားသိရန်လာပြီဖြစ်ကြောင်းသေချာစေချင်. ဤသို့ပြုခြင်းသည်သင်တို့နှစ်ဦးသည်တစ်ဦးကောင်းထိုက်မတန်သို့မဟုတ်မကိုက်ညီမှုရှိပါတယ်လျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်ကူညီပေးပါမည်.
ဒေါ်. & ဦး. ကျွန်တော်တို့
အညီအမျှတစ်ဦးကိုနှစ်သက်နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်နိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေခြင်းဒီပထမ dater ဖို့အရေးကြီးတယ်. သင့်အနေဖြင့်ပထမဦးဆုံးနေ့ရက်တွင်ဤအချက်သည်အလွန်ထင်ရှားစေ. သင်သည်သင်၏ရက်စွဲသိရန်ဆည်းပူးင်မပြုမီ, သင်သည်အလျင်အမြန်ဒုတိယရက်စွဲအစီအစဉ်စေနှင့်ပင်အတူတူ getaways. သင်လည်းအများကြီး "ငါရှိသည်။ " လုံလောက်တဲ့ "ကျနော်တို့င်နိုင်ပါတယ်" နှင့်မဒီနည်းနဲ့သင့်ရဲ့နေ့စွဲကိုသင် clingy သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်ကြောင်းထင်မြင်စေခြင်းငှါသင်တို့ကိုငါမဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုသူတို့ကိုရှေ့တော်၌မိမိတို့ exit ကိုစီစဉ်ရှိသည်နိုင်လျှင်ပင်နှင့်သင်၏စာကြောင်းများစတင်ဖွင့်စေခြင်းငှါ စားပွဲထိုးအချိုပွဲပေးနိုင်. နောက်တစ်နေ့အဆင့်သင့်ရဲ့ပထမဆုံးနေ့စွဲရွေ့လျားပေါ်မှာသင့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့မှားဘ​​ယ်အရာမျှမရှိပါ, ကိုယ့်ရက်စွဲကိုသင်ကဲ့သို့တူညီသောလိုလားလျှင်သင်ဆုံးဖြတ်ရန်သေချာအောင်.
သင်သည်ကျိန်းသေလွတ်လပ်သောဖြစ်ကြပြီးသင်မည်သူဖြစ်သည်ကို Validator မှမည်သူမဆိုသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှမလိုအပ်ပါ. လတ်ြလပ်ခသင်နှင့်သင့်ရဲ့အသက်တာ၏ cutout ထပြီးဆန့်ကျင်မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုအတွက်ဦးစားပေးဖြစ်ပါတယ်. စိတ်ထဲ၌ဤ Keep: သင်သည်အဘယ်သူမျှလိုအပ်နေသို့မဟုတ်လွန်း untamable ဖြစ်ခြင်းမများ၏စွမ်းအင်ကိုထုတ်သွင်းသည့်အခါ, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ဖို့တစ်ဦးအလှည့်-off မှာဖြစ်နိုင်. လူတိုင်းသည်အချို့စွမ်းရည်မြှင့်အတွက်လိုအပ်ခံစားရရန်လိုလား. သင်ရုံရက်စွဲချင်ပြီးသင့်ရဲ့နေ့စွဲသင်ပိုမိုအချိန်မရွေးမကြာမီချင်လာလိမ့်သောရိုက်ချက်မပေးချင်ကြဘူးဆိုရင်, ဟုပြော. ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲစားပွဲပေါ်အရာအားလုံးနှင်ထုတ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်.
သင် dater ဤအမျိုးအစားဆိုရင်, အကယ်လို့သင်ဟာဆင်းဗေဒကိုသင်ချင်တယ်လူတစ်ဦး၏အမျိုးအစားကိုသိ. သင်သည်အပင်သင်တို့အသက်အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ကလေးတွေကဲ့သို့အဓိကဘဝအဖြစ်အပျက်များကိုတစ်ဦး Pre-စီစဉ်ထားသည့်အချိန်ဇယားရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည်ပါပြီ. သင်ပထမဆုံးချိန်းတွေ့ပေါ်မှာသင့်ရဲ့စံပြမင်္ဂလာဆောင်မည့်အစီအစဉ်များကိုတက်သို့ဆောင်ခဲ့စဉ်းစားခြင်းမပြုမီ, သင့်ရဲ့နေ့စွဲဖြင့်ရေကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်သင်၏ပန်းတိုင်နှင့်ရည်မှန်းချက်များကိုတက် match ကြည့်ပါ. တစ်စုံတစ်ဦးကကတိကဝတ်နှင့်ဆက်စပ်သောအရာနှင့် ပတ်သက်. ကြားနာရန်ကြန့်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူရုပ်ရှင်သွားချင်တဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းရှိနိုင်ပါသည်.
အဆိုပါကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Reader ကို
သင်၏အိမ်နီးချင်းအထက်တွင် Idealist လိုပဲ, သင်ဘာလိုချင်သိပေမယ့်သင့်ရဲ့နေ့စွဲကသူတို့ပိုက်ဆံကိုဘယ်လိုပေါ်နည်းနည်းပိုပြီးအာရုံစိုက်နေကြသည်. သင်ကသူတို့၏သြဇာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးမှကြွလာသောအခါသူတို့ကချီသီးနှံများကိုပုံသငျ့ပုံတင်းကျပ်တဲ့စိတ်ကူးရှိသည်. အဘယ်သူသည်ထိုသူတို့အဘို့အအလုပ်လုပ်ဖို့သို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်ဖို့အသုံးပြုသူတို့နေသောသင့်ရဲ့အမြင်ကိုထင်ဟပ်မှုရှိရေးအဘယ်သို့သောအ. ဒါကြောင့်အသက်ရှည်သမျှရှုထောင့်မှကြွလာသောအခါသင်လိုချင်တာလူတစ်ဦး၏အမျိုးအစားကို သိ. ကြီးလှပေ၏. တကယ့် bit နဲ့ပိုပြီးလုံးဝသင့်စံခရီးဦးကြိုပြုခြင်းမသူတွေနဲ့ရက်စွဲများမှပွင့်လင်းဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါစေ. သင်သည်သင်၏စံပြအခြေအနေတစ်ရပ် fit မထားတဲ့သူတစ်စုံတစ်ဦးလဲကျလျှင်သင်အံ့သြသွားစေခြင်းငှါ,, ကဘာဖြစ်လာ.